Home Wararka Farmajo oo Bilaabay Igu Sawir Iyo inuu Dib u indha Sarcaadiyo...
Farmajo oo Bilaabay Igu Sawir Iyo inuu Dib u indha Sarcaadiyo Aragtida Shacbiga Soomaliyeed.
Into Jiray Farmajaha hadda qaabilayaa urrurada Bulshada afartii Sano ee uu Madaxweynaha ahaa ee uu sharciyadda haystay? Waxaa uu dib u bilaabay siyaasaddii igu Sawir mid buka, mid baahan iyo mid qarankiisa u shaqeeya sida dhakhaatiirka la tacaalaya COVID 19 oo uusan weligiis wax wanaag ah u sameyn.
Farmajo Waxaa uu maalmahan bilaabay inuu kulamo la qaato bulshada qeybaheeda kala duwan, kuwaas oo uu weligiis intii uu Madaxweynaha ahaa uusan la kulmin. Weligiis lama kulmid qof soo codsaday mid uu isaga rabo mooyee, wuxuuna xafiiska Madaxtooyada u haystaa inuu yahay dukaan uu isagau leeyahay. Dadka Siyaasadda indha indheeyaa iyo kuwa isaga ku dhowba waxay MOL u sheegeen sababta uu habeenba qolo u qaabilayo xelligaan inay tahay:
Isagoo raba inuu mar kale siro ra’yul caalamka Bulshada Somaliyeed.
Inuu rabo inuu u cowdo una sheego in dadkaan oo dhan ay ka gardaran yihiin isaguna uu yahay qofka wanaagga dalkaan la raba, loona baahan yahay inay ku taageeraan ku tumashada Distuurka, Kireysashada Galaha Shacbiga, Weerarka Mucaaridka, Qiima dilka Siyaadsadda Arrimaha dibadda ee dalka iyo waxkasta oo xun oo dalkaan lagu dhaawici karo.
Inuu hoos ugu dhigo oo warbaahinta la qeybado hawlaha lagu diirsaday ee ay sida wada jirka ah uga qabteen magaalada Muqdisho RW Rooble iyo Midowga Badbaado qaran.
Inuu yahay naf la caari oo uu rabo inuu ka soo muuqdo laamaha warbaahinta dalka oo Khasab uga dhigay inay la joogaan haddiiba uu doqon salaamayo.
Iyo inuu rabo inuu dadka u muujiyo inuu sii yahay Madaxdweyne oo uu weli joogo oo waa I arkaay.
Farmajo weligiis afartii sano ee tagtay ma qaabilin bulshada uu hadda ku awrkacsanayo, haddana waxay ka tahay munaafaqnimo iyo marin habaabin aragtida dadka Somaliyeed, laakiin wuxuusan xusuus u lahayn inay dadka Somaliyeed barteen beenta Farmajo.
Dadka sida fiican u yaqaannaa waxay sugayaan khiyaanada kale ee uu la soo bixi doono maalmahan si uu u fashiliyo hawlaha doorashada ee uu hadda si habsami ah u wado RW dalka oo durbaba guulo waaweyn ka gaaray arrimahaas.
Dad badani waxay la socdeen in maanta ay ka ruuqaansadeen ciidankii badbaado Qaran magalada Caasimadda oo ay ku noqdeen goobihii difaaca iyagoon waxarna dhiig ka keenin. Ciidankan wuxuu ahaa mid aad u farxad galiyey shacbiga Somaliyeed, digniinna u diray cadowga gudaha iyo kan dibadaba. Sidoo kale Ciidanka XDS waxay farriin adag u dreen inaan Madaxweyne Somaliyeed laga oggolaaneyn inuu muddo xileedka kordhisto oo laga rabo mid waliba inuusan isku ceebeyn jidkaas wayna soo afjareen.
Waxaa kaloo dadka Somaiyeed u caddaatay in Ciidanka XDS ay yihiin kuwa ay isku halleyn karaan marka ay xaaladdu adkaato, marka laga reebo xoogaa yar oo dhuuniqaatayaal ah oo weli Farmajo la jooga.
Akristow haddaad u haysato in la dulmianayo Farmajo oo uu qof wanaagsan yahay xusuuso dhacdooyinkan:
Xelligii uu RW ahaa oo xoog looga qaaday Xafiiska.
Jaaliyadda Somaliyeed Baffulo oo uu diiday inuu xilka wareejiyo markii laga guuleystay, kadibna ay halkaas ku burburtay Jaaliyaddii oo dhan.
Iyo Maanta uu xilkii ka dhamaaday seddex bilood ka hor welina aan la aqoon goorta uu banneynayo xafiiska.
Ugu dambeyn Farmajo waxaa uu muuqdaa ruux ay Khasab tahay in Villada xoog looga saaro, waxaana khalad weyn oo lagalayo ah in mar kale loo ogolaado inuu dib dambe siyaasadda Somaliya uga shaqeeyo ama loo igmado xil muddeysan, kadib markii uu burburiyey aaminka ah inuu xafiisyada wareejin karo marka ay mudda Xileedka ka dhamaato.